ဗင်နီရယ်လိင်သည် OUT ဖြစ်သည်။ အပြာစွဲခြင်းသည် IN ဖြစ်သည်။ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်စစ်တမ်းကညစ်ညမ်းမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကိုမည်သို့ထိခိုက်စေကြောင်းဖော်ပြသည် - Your Brain On Porn
vanilla လိင် porn စွဲ IN ဖြစ်ပါသည်, OUT ဖြစ်ပါသည်: နှောင့်ယှက်စစ်တမ်း porn ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမထိခိုက်စေလျက်ရှိသည်ကိုဘယ်လိုထုတ်ဖော်ပြသ
ဦးဆောင်လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုးကျွမ်းကျင်သူများကယောက်ျားဖြစ်သောကြောင့် porn တွင် 'အထင်ကြီး' 'Feat ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစိုးရိမ်စိတ်ခံရရှာတွေ့
အမျိုးသမီးများဟာသူတို့ရဲ့အလောင်းကောင်အကြောင်းကိုမလုံခြုံဟုခံစားရနှင့် '' လုပ်ဆောင် 'ဖို့ဖိအားပေးခံရခံစားရတယ်
porn စွဲတိုးမြှင့်နေစဉ် '' Vanilla '' လိင်, လျော့နည်းနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်လာ
လူငယ်များသည်လိင်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ လိင်အကြောင်းလေ့လာခြင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူကြပြီး၎င်းသည်သူတို့၏ခံစားချက်အပေါ်အကြီးအကျယ်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
By Denis Kirkova
Published: 06: 56 EST, 18 ဇန်နဝါရီလ 2013 | ပြုပြင်မွမ်းမံ: 08: 35 EST, 18 ဇန်နဝါရီလ 2013
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်းလိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုးကျွမ်းကျင်သူများက porn အသုံးပြုမှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆက်ဆံရေးကြောင့်သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေထင်ရှားပါပြီ။
70-18 အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်လ porn ကို အသုံးပြု. ရန်ဝန်ခံနှင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးစလုံးက၏အသုံးပြုမှုကိုပိုပိုပြီးပျံ့နှံ့ဖြစ်လာနေသည်။ အသက်ယောက်ျားရာခိုင်နှုန်း 34 သို့သော်အဘယ်ကုန်ကျစရိတ်မှာ?
နာမည်ကျော်မဂ္ဂဇင်းဒီနေ့ရဲ့ဆကျဆံရေးအပျေါ porn ၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. 68 ဦးဆောင်လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုးကျွမ်းကျင်သူများကမေးခွန်းထုတ်လျက်, ရလဒ်အပြတ်အသတ်အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့သည်။
'လူငယ်များသည်လိင်မှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ လိင်အကြောင်းလေ့လာခြင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူကြပြီးသူတို့၏အမြင်များကိုပျက်စီးစေသည်'
မေးခွန်းထုတ်သည့်ကုသရာခိုင်နှုန်းခြောက်လ porn ရာခိုင်နှုန်းဆက်ဆံရေးနှင့် 90 အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ယုံကြည်ရှစ်ဆယ်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကြောင့်ညစ်ညမ်းမှကြားဆက်ဆံရေးပြဿနာတွေအတွက်တိုးမြင်ကြပြီ။
တစ်ချိန်ကအလွန်နယ်ပယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာကိုတှေ့မွငျ - - စီးပွါးအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်ညစ်ညမ်းယခုဒီတော့အလွယ်တကူသည်အတိုင်း, နာမည်ကျော်လည်းညစ်ညမ်းစွဲနေချိန်တွင် '' vanilla '' လိင်, လျော့နည်းနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်လာကြောင်းကြားပြောလေ၏။
နီးပါးအားလုံး (ရာခိုင်နှုန်း 94) စစ်တမ်းကောက်ယူကုသ၏ညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်၏ယောက်ျားရဲ့မျှော်လင့်ချက်တိုးပွါးယုံကြည်ရာခိုင်နှုန်းတစ်ဦးညစ်ညမ်းစွဲ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်တိုးနှင့် 63 မြင်ကြပြီ။
ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, porn ဆက်ဆံရေးအတွက် ticking အချိန်ဗုံးဖြစ်လာသည်နှင့်အိပ်ခန်းထဲမှာယောက်ျားရဲ့နှင့်အမျိုးသမီးယုံကြည်မှုကြိတ်ခွဲသည်။
အမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့အလောင်းကောင်အကြောင်းကိုမလုံခြုံဟုခံစားရနှင့် '' လုပ်ဆောင် 'ဖို့ဖိအားပေးခံရခံစားရနေတုန်းပိုပိုပြီးယောက်ျား, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့က porn ထဲမှာမြင်ရတဲ့' 'အထင်ကြီး' 'Feat ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစိုးရိမ်စိတ်ခံစားနေရပြီးနေကြသည်။
porn ကျွမ်းကျင်သူများကရာခိုင်နှုန်းကြောင်း 85 porn ရာခိုင်နှုန်းအမျိုးသမီးယုံကြည်မှုနှင့် 67 အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ထင်အချို့ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာနေသည်မိန်းမတို့သည်အိပ်ခန်းထဲမှာညစ်ညမ်းကြယ်ပွလိုပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဖို့ဖိအားအောက်မှာဖြစ်ကြောင်းသဘောတူသည်။
စိတ်ရောဂါသည်အမျိုးသားများအနေဖြင့်လက်ပ်တော့ပ်များထက်မိန်းမများနှင့်ဆက်ဆံမှုစွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်ဟု Psychosexual ကုထုံးပညာရှင်ကာရိုးဖရက်စတွန်ကပြောကြားခဲ့သည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်စိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာကုထုံး Karen Lobb-Rossini က 'လူငယ်များ (မိန်းကလေးများသာမကယောက်ျားလေးများကဲ့သို့) သည်လိင်မှုကိစ္စကိုလိင်မှုကိစ္စမှတစ်ဆင့်လေ့လာသင်ယူခြင်းသည်ပိုမိုများပြားလာပြီး၎င်းသည်သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်အမြင်များကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည်' ဟုဆိုသည်။
အချို့သောကျွမ်းကျင်သူများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ဆက်ဆံရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်ဟုဆိုကြသော်လည်းယခုအခါကျွမ်းကျင်သူများစွာကမူအိပ်ခန်းအတွင်းရှိမျှော်လင့်ထားသည့်အရာများကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်ဟု Cosmopolitan ၏အယ်ဒီတာ Louise Court ကပြောကြားခဲ့သည်။